Fahombiazan'ny fitsaboana :: Sitrana ny olona roa tamin' ireo voan'ny « coronavirus » • AoRaha
Olona roa tamin’ ireo mararin’ny « coronavirus » eto amintsika no efa sitrana soa aman-tsara. Anisan’ny nahitana soritr’aretina natahorana ny iray tamin’izy ireo saingy tsy misy ahiana intsony ny toe-paha- salamany amin’izao fotoana izao.
« Tsy atahorana amin’ny aretina coronavirus intsony izy ireo. Salama tsara sady tsy ahitana soritr’aretina hafa », hoy ny Pr Vololontiana Hanta, mpitondra tenin’ny Ivon-toeram-pibaikoana momba ny « Covid-19 » (Cco) eny Ivato, nandritra ny tatitra nataony tao amin’ny onjam-peo sy fahitalavi-pirenena, omaly.
Efa nody any an-tokan- tranony ireo olona roa ireo, nefa mila manaraka ny toromarika ara-pahasalamana rehetra, toy ny fialana sasatra. Marihina fa indroa natao fitiliana ireo marary sitrana ireo, taorian’izay natao voalohany ka nahitana ny fitondrany ny tsimok’aretina. Mielanelana roa andro ireo fitiliana roa ireo. Rehefa tsy nahitana tsimok’aretina intsony ny marary no azo ambara fa sitrana. « Mahatsiaro maivana sy tsy misy soritr’aretina na mety hisy koha-maina mihamalefaka ny toe-batan’ny marary efa sitrana », araka ny fanampim-panazavan’ ny Pr Vololontiana Hanta.
Marary iray hafa
Etsy an-kilany, olona iray hafa indray no fantatra fa mitondra ny tsimok’aretina « Covid-19 » na eo aza ny fahasitranana voalohany voa- marina tamin’ity valanaretina ity. Vehivavy, 21 taona, nandeha tamin’ny zotram-piaramanidina Air France AF 934, tamin’ny 27 marsa 2020, izy io. « Efa mitoka-monina amin’ny toerana iray izy », hoy ny mpitondra tenin’ny CCO.
Tafakatra roa amby fitopolo ny isan’ireo olona voan’ny “coronavirus” voatily eto Madagasikara. Ny fitopolo no manaraka fitsaboana eny amin’ny tobim-pahasalamana, hatramin’izao.
« Ny iraika ambin’ny folo amin’ireo marary no ahitana soritr’aretina. Na izany aza, tsy misy sempotra na mila tohanana ôksizena izy ireo», hoy ny Pr Vololontiana Hanta.
Fepetra amin’ny valanaretina :: Mihamaro ireo mandika ny fihibohana